नवराज महतारा, सिमकोटमा
अध्यक्ष लामाले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन दर्जीलाई यसबारे खोजबिन गर्न लगाए । असार महीना बित्यो, तर केही पत्तो लागेन । सिमकोट गाउँपालिकाको खाताबाट डेढ करोडभन्दा बढी रकम ‘हराएको’ खबर विस्तारै फैलिंदै गयो ।
करीब दुई महीनापछि मात्र खुल्यो– सिमकोट गाउँपालिकाको खातामा रहेको रु.१ करोड ५७ लाख ५२ हजार ६६७ हुम्लाकै अर्को गाउँपालिका खार्पुनाथको खातामा २६ जेठमै ‘ट्रान्सफर’ भएको रहेछ । सिमकोटका अध्यक्ष लामाको हैरानी बढिरहँदा खार्पुनाथ गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका भने थप योजना तर्जुमा गरेर बजेट खर्च गर्ने चटारोमा थियो ।
सिमकोट गाउँपालिकाको खातामा रहेको रकम खार्पुनाथको खातामा कसरी पुग्यो ? दुई महीना बित्दासम्म यो प्रकरण किन खुलेन ? अहिले छानबिनमा रहेको यो प्रकरणका धेरै पाटा भने खुलिसकेका छन् । यो प्रकरणबारे सिमकोट गाउँपालिकाका लेखापाल देवकोटा र खार्पुनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रवीर शाही शुरूदेखि नै जानकार रहेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय बाणिज्य ब्यांक, हुम्ला । तस्वीरः नवराज महतारा
कारण देवकोटाले सिमकोटसँगै खार्पुनाथको लेखा हेर्ने जिम्मा समेत पाएका थिए । देवकोटा र शाहीले असार महीना बित्दासम्म जेनतेन यसलाई गुपचुप राखे । तर, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले साउन मध्यतिर गरेको लेखा परीक्षणमा भने यो प्रकरण छिप्न सकेन । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले खार्पुनाथ गाउँपालिकाको आम्दानीभन्दा करीब रु.२ करोड बढी खर्च भएको विवरणमाथि प्रश्न उठाएपछि मात्र गएको १९ भदौमा यो प्रकरणको रहस्य खुल्यो ।
तर, यो प्रकरण सापटी थिएन । बरु, यसलाई सापटीका रूपमा अथ्र्याएर दुवै गाउँपालिका प्रमुखले यसभित्र भएको बदनियतमा पर्दा लगाइदिएका छन् । यति ठूलो रकम यताउता गरिएको प्रकरणबारे सोध्दा दुवै गाउँपालिकाका अध्यक्षले यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको दाबी गरे । जबकि, खार्पुनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष कर्ण रावल यसबारे भलिभाँती जानकार रहेको देखिन्छ ।
जस्तो, खार्पुनाथले गएको आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) मा करीब रु.३० करोडका योजना तर्जुमा गरेको थियो । तर, असार तेस्रो साता मात्र उसले गाउँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर करीब तीन दर्जन योजना सम्पन्न गर्‍यो, जसमध्ये अधिकांश गाउँपालिकाको भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाही नै भन्छन्, “गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय तत्कालै लागू भएको छ, यसबारे गाउँपालिका अध्यक्षलाई जानकारी थिएन भन्न कसरी मिल्ला र ?”
अहिले सिमकोट र खार्पुनाथ दुवै गाउँपालिकाको लेखा हेर्ने जिम्मेवारी आश्विनीकुमार देवकोटामा रहेकाले अंक तलमाथि परेको हुनसक्ने दाबी गरिंदैछ । तर, तथ्यहरूले त्यस्तो देखाउँदैनन् ।
जस्तो, २४ जेठमा खार्पुनाथ गाउँपालिकाले सञ्चित कोषको रकम ट्रान्सफर गरिदिन हुम्लास्थित राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांकलाई लेखेको पत्रमा खाता नम्बर नै फरक फरक लेखिएको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाही र लेखापाल देवकोटाको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा विवरणमा एउटा र तपसिलमा अर्को खाता नम्बर उल्लेख छ ।
विवरणमा उल्लेख खाता नम्बर सिमकोट गाउँपालिकाको भएकाले ब्यांकले सोचविचार नै नगरी रकम ट्रान्सफर गर्दा उसको रकम खार्पुनाथको खातामा पुगेको देखिन्छ । र, त्यसरी ट्रान्सफर भएको रकमको ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाउँपालिकाको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिएको छ ।